Abacwaningi Abaqanjwe Ngomkhiqizo Owehlisa Ingozi Yokuhlaselwa Kwenhliziyo - Ukufaneleka kanye nempilo 2022
Abacwaningi Abaqanjwe Ngomkhiqizo Owehlisa Ingozi Yokuhlaselwa Kwenhliziyo
Ngempilo yenhliziyo, udinga ukudla i-potassium eyanele, njengokudla ubhanana nsuku zonke.
Abacwaningi eNyuvesi yase-Alabama benza ucwaningo ngamagundane ayesengozini enkulu yesifo senhliziyo. Amagundane ahlukaniswa amaqoqo amathathu. Abanye banikezwa i-potassium encane, abanye - evamile, kanti okwesithathu - umthamo ophezulu. Kuvele ukuthi kulawo magundane abedla ukudla okune-potassium ephansi, imithambo iyancipha futhi iqine.
Emagundaneni anikezwe umthamo omkhulu we-potassium, imithambo ngokushesha yaba nokunwebeka futhi inempilo. Umsebenzi wesimiso senhliziyo segundane ufana ngezindlela eziningi nowomuntu. Ngakho-ke, ososayensi baphetha ngokuthi i-potassium iyimaminerali ebalulekile esiza ekuvimbeleni ukuhlaselwa yinhliziyo nokushaywa unhlangothi kubantu.
Kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi i-potassium eningi ekudleni iholela emiphumeleni emibi - ibangela ubuhlungu besisu, isicanucanu kanye nesifo sohudo.
Ukudla kwansuku zonke kwe-potassium kumuntu omdala onempilo cishe kungama-3500 mg. Ingxenye yesine yalesi silinganiso ingatholakala ngokudla ubhanana o-2 phakathi nosuku. Ngaphezu kwalokho, ukudla okune-potassium kuhlanganisa amazambane, i-broccoli, igciwane likakolweni, imbewu, inhlanzi nezinkukhu.
Isexwayiso, Amavithamini: iyini ingozi yokudla kwabo okungalawuleki
Iyini ingozi ye-Vitamin C, nokuthi ungayisusa kanjani
Amavithamini ayizinto ezibalulekile ezidingekayo ukuze kugcinwe imisebenzi ebalulekile yomzimba womuntu. Yiziphi izinzuzo nezingozi ze-vitamin C, kanye nendlela yokuyithatha ngendlela efanele - funda kundaba yethu
I-acetone enganeni: izimbangela, ingozi, ukuvimbela kanye nokwelashwa
Thola ukuthi yini abazali okufanele bakwazi futhi bayenze uma i-acetone yengane yabo ikhuphukile - sizoyinqoba i-acetone syndrome ngesayithi elithi The One. I-acetone enganeni: iyini ingozi nokuthi ungayiphatha kanjani
Umbala wokuma kwenhliziyo: shintsha impilo yakho ngombala
Ungawushintsha kanjani umoya wakho ngombala othile? Sizokutshela ngethonya lemibala eyinhloko - obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, oluhlaza okotshani nonsomi. Into esemqoka ukukhetha umthunzi ofanele